Vaovao - Nahoana no misafidy fitaratra?
Ny fanadihadiana, natolotry ny Friends of Glass sy ny European Container Glass Federation (FEVE), dia mampiseho fa mihoatra ny mpanjifa maherin'ny 10.000 any amin'ny firenena 13 eropeana, tsy ny 90 isan-jaton'ny olona ihany no manolotra ny fitaratra ho toy ny fitaovana fonosana tsara indrindra, fa ny antsasaky ny ny mpanjifa mividy vokatra vita feno fitaratra noho ny telo taona lasa izay.
Ny ahiahy momba ny tontolo iainana dia ny antony lehibe indrindra rehefa manapa-kevitra momba ny fonosana, ary miaraka amin'ny fahitana ny vera io fonosana io dia mihalalina ho toy ny safidy mahasoa indrindra amin'ny tontolo iainana.
Ny fahazoan-dàlana mahavariana ny tontolo iainana dia miainga avy amin'ny fahafahany miverina ao anaty rafi-tampanana mihidy: azo atao avy amin'ny vera hafa, vera miverina, ary ny akora voajanahary toy ny fasika, ny lavenona ary ny limosony, izay afaka mijanona ao anaty rafitra intsony. lavitra. Tsy midika fotsiny hoe tsy dia fatiantoka, fa hampihena ny filana fitaovana vaovao ho azo ihany koa eo amin'ny toerana voalohany.
Michael Delle Salve, tompon'andraikitra amin'ny serasera zokiolona ao amin'ny FEVE, dia nizara ny drafitry ny Federasiona hananganana ireo valiny ireo: Tsy vitan'ny miverina fotsiny ny olona fa miverimberina ary tsara kokoa ”.
Ny tombony azo avy amin'ny fonosana fitaratra dia mazava: maharitra, azo ihodivirana, 100% ary tsy maintsy averina lalandava, azo averina sy azo averina indray; azo antoka ny mitahiry sakafo sy zava-pisotro miditra ao; ary tsara tarehy, tian'ny mpanjifa.
Avy amin'ny natiora ny vera
Ny vera dia vita amin'ny zavatra voajanahary maniry be dia be amin'ny natiora. Ny alkolikan'ireo akora ireo dia miteraka fitaovana tokana. Tsy misy takelaka na akora simika hafa ilaina amin'ny famitana azy.
Ny fitaratra dia 100% azo averina ary tsy misy farany
Ny vera dia vita 100% ary azo averina tsotsotra tsy misy fiafarany kalitao na fahadiovana. Ny famerenam-bokatra fitaratra dia rafitra mihidy mihidy, tsy mamorona fako fanampiny na vokatra. Ny fitaratra dia iray amin'ireo ohatra vitsivitsy izay azo amboarina miverimberina foana ilay akora mitovy amin'ny tsy fahaverezan'ny kalitao.
Azo ampiasaina ny takelaka fitaratra: afaka manana hatramin'ny 40 izy ireo
Ny fandikana ny tavoahangy fitaratra dia mampihena ny fiantraikany amin'ny ankapobeny ary mampitombo ny lanjan'ny vera maharitra hatrany. Ny fitaratra azo averina dia vahaolana hafa tsara azon'ny orinasa atolotra ho an'ny toe-tsena manokana.